Tsy voahaja ny zo fototra: miandry fitsarana ny 60%-n’ny voafonja | NewsMada
Tsy voahaja ny zo fototra: miandry fitsarana ny 60%-n’ny voafonja
Amin’izao fotoana izao, mahatratra 24 000 ny isan’ny voafonja manerana ny Nosy ka mbola tsy voatsara avokoa ny antsasa-manila mahery (60%). « Tsy manaja ny zo fototra maha olona izany satria mialoha ny maha voafonja azy, olombelona ihany koa izy ireny », hoy ny filohan’ny vaomieram-pirenena mahaleo tena momba ny zon’olombelona (CNIDH), Rabenoro Mireille, omaly teny Ankorondrano. Ankoatra ny fitarazohan’ny fitsarana, efa antitra ny fotodrafitrasa sady tsy mahazaka ny isan’ny voafonja intsony. Mitarika ny aretina samihafa izany ka mahatonga fahafatesana. Tamin’ny taon-dasa, 127 ny voafonja namoy ny ainy tamin’ny toeram-pamonjana rehetra.
Ho an’ny eny Antanimora manokana, voalaza fa 18 sahady no maty hatramin’ny ny fiandohan’ny taona no ho mankaty. Antony ny tsy fahampian-tsakafo, ny aretina raboka… Tsy manana mpitsabo koa ny toeram-pamonjana eny Antanimora, nanomboka ny volana janoary lasa teo.
Nanambara ny tomponandraikitry ny minisiteran’ny Fitsarana fa hampitomboana avo roa heny ny tetibola homena ny minisitera (ao anatin’ny volavolan-dalàna momba ny tetibola 2019) ka anisan’ny hanompanana vola bebe kokoa ny fanatsarana ny fotodrafitrasa misy.
Mahatratra 2 miliara Ar ny sora-bola amboniny ho an’ny tetibola ampiasaina ho an’ny taona 2019. Efa misy ny fepetra navoakan’ny minisitera mpiahy hamahana ny olan’ny fiainan’ny voafonja ka ilaina ny fifanampiana eo amin’ny mpisehatra rehetra. Izay no nikarakarana ny adihevitra hanatsarana ny fandraisana an-tanana ny voafonja, niarahan’ny minisiteran’ny Fitsarana, ny fiarahamonim-pirenena ary ny CNIDH. Momba ny fotodrafitrasa, misy vinavina hanitarana ny fonjan’Antanimora ka hafindra eny Atsimondrano.